सम्बन्ध र स्वार्थ (निबन्ध) – Chitwan Post
सम्बन्ध र स्वार्थ (निबन्ध)
प्रकाशित मिति: शनिबार, बैशाख १४, २०७६
‘विवाह स्त्रीका लागि सुरूआत र पुरूषका लागि समाप्ति हो’– एक जना विद्वान्ले भनेका छन् । उपरोक्त उक्ति सारै मार्मिक र मननीय लाग्छ ।
जीवनप्रति प्रत्येक मानिसका आआफ्ना सोच र मूल्यमान्यताहरु हुन्छन् । सबैको अनुभवले जीवनलाई केही न केही आलोक दिएर गएका हुन्छन् ।
मैले समाज पढेर केही यस्ता उदाहरणहरु पाएको छु, ती विद्यालय र विश्वविद्यालयका पुस्तकमा भेट्न सकिनँ ।
कुरो बिहेको हो । बदमासभन्दा बदमास मानिस बिहे गरेर सप्रिएका छन् । कोही बिहे गरेकै कारणले बिग्रिएको पाएको छु । कसैले बिहेपछि भटाभट प्रगति गरेको देखेको छु भने कोहीचाहिँ फर्सी कुहिएझैँ फतक्क गलेर गएको पाएको छु । बिहेका बारेमा अर्को एउटा चल्तीको भनाइ नै छ– ‘बिहे गर्ने र नगर्ने दुवै मानिस सन्तुष्ट हुन सक्दैन ।’ यसो किन भनेको होला ? सायद् यसमा निराशावादी चिन्तनले काम गरेको छ कि ?
तीनथरी मानिसको भुइँमा खुट्टा हुँदैनन् रे ! एउटा भर्खर एसएलसी पास गरेको विद्यार्थीको । दोस्रो, भर्खर बिहे गरेका मानिसको । र तेस्रो, बिहेमा जन्ती गएका जन्तारूको । किन यसो भनिएको होला भनी खुब सोचेँ । एउटा तर्क मानसपटलमा फुत्त आयो । हाईस्कुल शिक्षाको अन्त्य भनेर एसएलसी परीक्षालाई लिने गरिन्छ । जो परिश्रमले पढ्दछ या भविष्यमा असल या ठूलो मानिस हुँने इरादा गर्छ ऊ त सारै पात्तिँदैन होला । मात्तिँदैन होला । तर, जसलाई एसएलसी नै संसारको ठूलो डिग्री भन्ने भ्रम हुन्छ ऊचाहिँ ठूलो भुइँमा न भाँडामा हुन्छ । उसलाई आफूले केकेन गरेको मिथ्या अभिमान हुन्छ । नेपोलियनले संसारै जितेजस्तो गर्व हुन्छ । त्यसैले, भर्खर एसएलसी पास गरेका मानिस छोइ नसक्नाका हुन्छन् । यसोभन्दा भर्खर एसएलसी पास गरेर यो निबन्ध पढ्ने कलिला पाठकपाठिकाहरु मसँग रिसाउन त नरिसाऊलान् हगि !
हनिमुन पिरियडका बेहुलाबेहुलीको समेत भुइँमा खुट्टा हुँदैनन् । अलिअलि गोड्धुवा हुन्छ, बाँकी बक्यौतामा । कहिले ससुराली र कहिले घरमा आउजाउ परिरहेकै हुन्छ । भर्खरका बेहुलाबेहुली भनी कार्यबोझ त्यति हुँदैनन्, अनि त्यो समय केटाकेटीले चिनी पाएजस्तो हुन्छ एकअर्कालाई । सो बेलामा कसैलाई अर्ती–बुद्धि दिनु भनेको सोझै उसलाई गाली गर्नुसमान हो । पैसासैसाको तातो, न व्यवहारको झन्झट अनि भर्खर भर्खर पतिपत्नी हुनुको रमरमी गर्वानुभूतिले उनीहरुका दिमागमा घर गरिरहेका हुनाले तिनीहरुले मानिसलाई मानिस नै गन्दैनन् ।
तेस्रो पक्षचाहिँ बिहेमा जन्त गएका जन्तीको हुने गर्छ । निम्तारूका रुपमा गएका जन्तीहरुको मनोवैज्ञानिक फाँइफुट्टी खुब हेर्न लायकको हुन्छ । यो भएन, त्यो भएन, यस्तो हुनुपथ्र्यो, त्यस्तो भयो आदि आदि । फर्माइस नानानौरङ्गी हुन्छन् । आपका धन कि बापका धन, त्यसबेला न आपका धन हुन्छ न बापका धन । मन लाग्छ ज्यूनारान ग¥यो । मन पर्दैन आफली दियो र एकौटा अब्डी लगायो । आफ्नो भए त्यतिको गतिगँरास हुन्थ्यो÷हुँदैनथ्यो, नारायण शिव ! अर्कालाई ह्यान भएन त्यान भएन । कुरा गर्न त सजिलो हुन्छ, पु¥याउन गाह्रो ।
गाउँमै जन्ती जाँदा मैले सुनेको थिएँ धेरैअघि :
‘भन्नजस्तो सजिलो र गर्नजस्तो गाह्रो
कुराजस्तो मिल्ने र कामजस्तो साह्रो
भोकजस्तो रोग र अन्नजस्तो औषधि
बाबुजस्तो साथी र आमाजस्तो भान्से’
अर्को एउटा भनाइ छ– रवि नपुग्ने ठाउँमा कवि पुग्छन् र कवि पनि नपुग्ने ठाउँमा अनुभवी पुग्छन् । हो, अनुभवीले गरी नभ्याएको ठाउँ नै छैन । शास्त्रले भनेको छ– पढेरभन्दा परेर जानिन्छ ।
सन्दर्भ थियो, मीठो झन्भटको ।
यहाँ त कुरा गर्छ आग्राको काम गर्छ गाग्राको भयो । बाटो बिराएको होइन पाठक महोदय ! भूमिका बाँधेको पो । समाजमा बाबु चिनाउने जिम्मा आमाले पाएकी हुन्छिन् । हुन त, दुवैको कर्तव्य र जिम्मेवारी बराबरी छ तर बाबुभन्दा आमाको लेखो बढी पाइन्छ । आमाले दस महिना पेटमा बोकेर पृथ्वीमा ल्याउन जुन हैरानी हुन्छ त्यो बाबु बन्ने अवसर पाएकालाई कहाँ हुन्छ ? ऊ आमाले नै झन्झट गरिदिएको भरमा बाबु बनेको हुन्छ, तर बाबु बनेपछि भने उसले पनि आजआज भोलिभोलि भन्दाभन्दै बिस्तारै यस्ता कोहराममा आफूलाई फसाएको पाउँछ । शिशु हुर्काउने सम्बन्धमा आमाले नानाभाँती गोरखधन्दामा आफूलाई अल्झाए पनि व्यवहारको टेको भनेका दुवै बाबुआमा हुन् । मैले खासगरी परेवाको सूक्ष्म अध्ययन गर्दा के पाएको छु भने भालेपोथी दुवैले अन्डा अवस्थामा कार्र्यिवभाजन गरी छोपेका हुन्छन् । भाले दिउँसो ओथारामा बसेको हुन्छ भने पोथीचाहिँ रात्रिकालीन समयमा बसेकी हुन्छे । तर, जब उनीहरुले बीस दिनमा नयाँ चल्ला कोरल्छन् त्यसपछिका केही दिन भालेको काम सकिएझैँ हुन्छ । ऊ क्रमशः आफ्नै संसारमा मस्त हुन्छ भने पोथी रातोदिन चल्लाका स्याहारमा मग्न हुन्छे । केही दिनपछि जब बच्चा अलि ठूला हुँदै जान्छन् त्यसपछि भने भालेपोथी दुवैले चुच्चामा पक्रेर चारो ख्वाउने दुःखेसो गर्छन् । यहाँनेर पनि भालेभन्दा पोथी अल्लि बढी जिम्मेवार पाएको छु मैले ।
मानिसको पनि त्यही हो । अल्लि पहिले पितृसत्तात्मक परिवारमा आमाको काम घरबाहिरका हुन्थेनन् । उनी नवजातका ससाना स्याहारसुसारमा व्यस्त हुन्थिन् । बाबु घरबाहिरको काम हेर्थे, तर जब कृषि युगको समाप्ति भयो र औद्योगिक युगको आरम्भ भयो त्यसपछि भने मानिसमा घडी–घन्टाअनुसारका श्रमविभाजनका रुपरेखाहरु तयार भए । हिजोआज सहरी समाजमा बाबुले गर्ने आमाले गर्ने भनेर कामको बाँडफाँट गरिने परम्परामा पूर्र्णिवराम लाग्दै जाँदो छ । सरकारले पनि जागिरका सिलसिलामा आमालाई सुत्केरी भएको अघिपछि गरी साठी दिन बिदाको सुविधा दिएको छ भने बाबुलाई पनि सुत्केरी स्याहार बिदा भनी केही दिनको छुट्टी दिएको पाइन्छ । अर्थात्, दुवै मिलेर काम गर भनेको हो ।
अधुनातन विचारमा दुवै मिलेर व्यवहार बढाउने हो । दुवै मिलेर समस्याको उठान अनि बैठान गर्ने हो । आपसी सममदारीमा घर र घरबाहिरका कामलाई मिलीजुली गर्नुमा कुनै अन्यथा हुँदैन तर, समाजमा भएको छ त यस्तो ? छैन ।
आमाहरु घरबाहिरका काममा निस्किए पनि उनीहरुलाई झन्झन् दोहोरो–तेहेरो भूमिका गर्नुपर्ने बाध्यताले घेरेको छ । कामकाजी महिलाका कहिरनहरु बेलाबेला अखबारका पानामा करूण शैलीमा छापिएका पाइन्छन् ।
ए ! मीठो झन्झटमा दुवै सामेल भएपछि दुवैले आफ्नो हिस्साको काम फत्ते गर्नुपर्छ नि ? अचेल लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास शनैःशनैः हुन थालेकाले यो काम पुरूषले, त्यो काम महिलाले गर्ने भनेर किटिएको पाइँदैन, तर सम्पूर्ण समाजमा त्यस्तो आदर्श कहाँ छ र ! प्रसिद्ध हास्य अभिनेता हरिवंश आचार्यले एउटा गीत गाएका छन्– मेरो माया उनान्सय तिम्रो माया सय, एक थपी दिन्छु म हुन्छ दुई सय । कति मार्मिक र युग सुहाउँदो छ यो गीत !
‘साना हुँदा मर्ला भन्ने पीर, ठूलो भएपछि मार्ला भन्ने पीर’–भन्छन् औसत छोराछोरीले दुःख दिएका केटाकेटीका आमाबाबुुहरु । आफँैले पहिला सरक्क सर्काएर टाउकामा पु¥याउने अनि पछि दुःखका गीत गाउने ! नानीहरुलाई कसरी असल बनाउने भन्ने सम्बन्धमा एउटा परिवारमा बाबुको पनि भूमिका आमाभन्दा कम आँक्न मिल्दैन । प्रकृतिले पुरूषलाई सन्तान जन्माउन सक्नेमात्र बनाइदिएको छैन, तर बाँकी सम्पूर्ण कामहरु गर्न सक्ने बनाएको छ । युरोप र अमेरिकाको समाजमा अब कम्तीमा छोरा र छोरीमा भेदभाव छैन । आमा र बाबुले सम्पादन गर्ने कामका सिलसिलामा रोकटोक छैन । हामी अहिले लोकतन्त्र र समावेशीका कुरा कान फुट्ने गरी सुनाउँदै छौँ । यस्तै बेलामा हामीले नयाँ परम्पराको सुरूआत गर्ने हो ।
पुरानो माध्यमिक तहको पुस्तकमा ओखलढुङ्गातिरका कृष्णप्रसाद भट्टराईको एउटा आमा कविता थियो, जसमा आमाको महिमालाई अति नै सुललित गरी कविले लेखेका थिए :
‘आमाको रुप बिग्रन्छ
सन्तान पर भै जान्छन्
डोलीमा अन्मिएपछि ।
संसारमा सबै चीज
खोजे मिल्छ घरीघरी
तर जन्म दिने आमा
पाइँदैन कसै गरी !’
यस्तो भनेर आमाको महिमालाई नकार्न नमिल्ने गरी कविले व्यक्त गरेका थिए ।
आज जमाना बदलिएको छ । आजका मानिसले विज्ञानका मद्दतले आमाको परिचय र परिभाषामा फेरबदल ल्याएका छन् । युरोप, अमेरिकातिरका सरोगेट मदरका उदाहरणहरु दक्षिण भारतमा छ्यासछ्यास्ती आईनै सके । भोलि नेपाली समाजमा ती चलन नआउलान् भनेर भन्न सकिने स्थिति छैन । अब आमा पनि दुईथरी हुने भए– पेट बोकिदिने सरोगेट मदर र बाबुको वीर्यलाई स्वीकार्ने आमा । जसले भाडामा बोकिदिन्छे ऊ आफ्नी आमा नहुन सक्छे, अनि जो आफ्नी आमा हो उसले पेटमा नबोक्ने भएपछि समाजमा अर्कै संस्कारको उदय नहोला भन्न सकिन्न । भविष्यका नवजात शिशुलाई आफ्नै आमाको पेटबाट आउने हक पनि विज्ञानले खोसिदिँदै छ । त्यस्तो अवस्थामा कसरी मातृवात्सल्यताको बखान गर्नु ? क्लोनिङ्ग प्रविधिले त नयाँ जीव सृष्टि हुन अब शुक्रकीट र डिम्बको मिलनै नचाहिने भयो भन्छ । चिताउँदै नचिताएका नयाँनयाँ समस्याहरु हाम्रो समाजमा नजिक–नजिक आउँदैछन् ।
मीठो झन्झटमा त मैले उल्लेख गर्न खोजेको कुरोको चुरो के हो भने हामी जो बाबुआमा भएका छौँ उनीहरुले आफ्ना छोराछोरी जन्माएपछि हुर्काउन र बढाउन प्रत्येक आमाबाबुले केकति नानाभाँती झन्झटहरु गर्नुपर्छ ? त्यसलाई यहाँ पेश गर्न खोजेको हो । अघिको झन्झटमा मिठासैमिठास हुन्छ, किनकि त्यहाँ आफूले सिर्जेका दुःखकष्टहरु हुन्छन् । गुहुुमुत पनि त्यसबेलाका समयमा आमाबाबुलाई त्यति छिःछिः दूरदूर गर्न लायक हुँदैनन् । सपनाका पोकाझैँ मानिएका सन्तानहरु बढ्लान् र पढ्लान्, त्यसपछि आफ्नो भाग्य र भविष्य बनाऊलान् भनी बाबुआमाहरु अहोरात्र खाइनखाई आफ्ना केटाकेटीहरुलाई आफ्नो सम्पूर्ण समय सुम्पिरहेका हुन्छन् । यहाँनेर अचम्मको कुरो के छ भने संसारमा जोकोही आमाबाबुले आफ्ना सन्तानमाथि गर्ने लगानी उठ्छ नै भन्ने कुनै गुञ्जायस हुँदैन । छोराछोरीमा गरिने लगानी त्यस्तो जोखिम भरिएको लगानी हो जो उठे पनि जीवनको उत्तरार्धमा आमाबाबुहरु रित्तै हुन्छन्, नउठे त झन् रित्तै हुन्छन् । भीरबाट लडे पनि किलो रित्तै, बाघले खाए पनि किलो रित्तै भन्ने नेपाली उखानलाई यहाँनेर सम्झनुको कुनै विकल्प छैन ।
हामीले कति छोराछोरीहरु विदेश गएर पढीगुनी अथाह धनसम्पत्ति कमाइसकेपछि पनि आफ्ना आमाबाबुहरुलाई हेर्दै नहेरेको देखेका छौँ, अनि जसको लगानी खेर जान्छ वा डुब्छ तिनीहरुलाई पनि पूर्ण सन्तुष्टि प्राप्त हुँदैन । बम्बैका लड्डु जो खाया ओ भी पछताया, जो नही खाया ओ भी पछताया भनेझैँ ।
एकचोटि सिरहातिरको एउटा आदिवासी जनजाति समुदायका मानिसले आफ्ना मेधावी पुत्रलाई काठमाडौँको अमृत क्याम्पसमा साइन्स पढाउन राखेछन् । एक–दुई वर्षसम्म पनि छोरा घरमा आमाबाबुलाई भेट गर्न नगएपछि पत्नीको करकरमा बाबु घ्यू–कुराउनी साथमा लिएर काठमाडाँै गएछन् । खोजी खबर गर्दा तिनले छोराको पत्तो त लगाए, तर होस्टलमा बसेको तिनको आफ्नै छोराले जब बाबुलाई चिन्न इन्कार गरेर नोकर भनेर सम्बोधन ग¥यो त्यसबेला तिनी अमृतको गेटमा बसेर धुरूधुरू रोएका थिए रे । छोराछोरीलाई आफूभन्दा बढी पढाउनु बेकार हो भन्दै तराई फर्किएका थिए रे ! भनाइको मतलब सबै छोराछोरी बैरी नै हुँदैनन्, तर तिनको हकमा भैदियो त्यस्तै । एउटा बाबुको एउटा छोरो या एउटी छोरी असल भयो, सप्रियो भने या सप्रिई भने उसको शतप्रतिशत नतिजा राम्रो हुन्छ । तर, त्यही छोराछोरी बिग्रिए भने पुनः शतप्रतिशत नै नतिजा बिग्रन्छ । आफ्नोचाहिँ बिग्रिसकेपछि अरुको हेरेर थुक निल्नुभएन ।
अबका हामीजस्ता उत्तरआधुनिक समाजमा बाँचेका बाबुआमाहरुले छोराछोरीबाट फलको आशा राखी लगानी गर्नुभन्दा मलाई त के साँचोजस्तो लागेको छ भने आफूले अभिभावकको कर्तव्यमात्र निभाउने हो । आवश्यकताभन्दा बढी आशा गर्नु बेकार छ । सप्रियो भने पनि बाबुआमाको साथबाट बाहिर निस्किएपछि उनीहरुकै बेग्लै दुनियाँ हुन्छ । सधैँ चिप्लो घस्न या चाट्न आइरहँदैनन् । बिग्रिए भने पनि त्यस्ता सन्तानहरु बाबुआमाका लागि जिन्दगीभरीका लागि घाँडो सावित हुन्छन् । बाबुआमाले आफ्नो रगतको टुक्रा, मुटुको धड्कन बिग्रियोस् र नासियोस् त अवश्य भन्दैनन् होला ?
चराका बच्चा हुर्काएजस्तै हो, पखेँटा नलागुन्जेल स्याहा¥यो र लागेपछि आफूअनुकूल जोडी च्यापेर उनीहरुकै दुनियाँ बसाउन भुरूरूरूरू… उडेर गैहाल्छन् ।
मान्छेहरु किन यस्तो दुःख बेसाउने खालको मीठो झन्झट गर्छन् होला ? मैले पैँतालीस नाघे पनि अझै यो गुह्य बुझ्न सकेको छैन । सन्तानको भविष्य र लगानीप्रति ममा पनि अझ आशक्ति चुलिएकै छ ।
सभ्यताको रिले दौड हो, बाबुआमा बन्ने कर्तव्य । हाम्रा पनि कोही बाबुआमा थिए । हामी पनि कसैका बाबुआमा हौँ । त्यसैले, सन्तानमाथि धेरै आशा नगर है दम्पती हो । धेरै लोभ नगर है नवजोडीहरु हो । लोभले लाभ अनि लाभले विलाप हुन्छ । होस राख ।
समयान्तरमा छोरो बाउ हुन्छ । छोरी आमा हुन्छे तर अघिका ती आफूले दिएका हैरानी सबै बिर्सन्छन् । जब आमाबाबुहरु बूढाबूढी हुन्छन् त्यसपछि तिनीहरु आफैँ जोकर फाल्टु हुँदै जान्छन् । हृदयको टुक्रा भनी पालेका छोराछोरीहरुले कति आमाबाबुलाई पाटीमा पु¥याएका छन्, अनि कतिले झुक्याएर भएको श्रीसम्पत्ति सबै सिरीखुरी पारेर सडकमा हु¥र्याएका छन् । जापानमा त्यहाँका केटाकेटीलाई, वृद्धवृद्धाहरुलाई कसरी स्याहारसुसार गर्ने, कसरी सम्मान गर्ने भनेर विद्यालयीय पाठ्यक्रममै राखेर पढाइने गरिन्छ रे ! अब नेपाली समाजमा पनि वृद्धको संख्या थपिँदै गएको यस्तो परिस्थितिमा हामीले पनि कोर्समा राखेरै वृद्धवृद्धाको हेरविचारसम्बन्धी ज्ञान दिएनाँै भने समाजमा अझ उच्छृंखलता बढेर जाने कुरामा अविश्वास गर्न सकिन्न ।
यहाँनेर छोराछोरीले सम्झनैपर्ने कुरा के भने प्रत्येक आमाबाबुले आफूलाई कसरी र कस्ता अनन्त कहर सहेर यहाँसम्म ल्याइपु¥याए त्यो कुराको हेक्का राख्नुपर्छ । पढेरमात्रै पनि हुँदैन । ज्ञानलाई आफ्नै अन्तरआत्माबाट निकालेर व्यवहारमा प्रयोग गर्नुपर्छ । नत्र, संसारभरिका पुस्तक पढेरै पनि केही अर्थ लाग्दैन ।
जीवनको पूवाद्र्धको झन्झट मीठो झन्झट र उत्तरार्धको झन्झट तीतो झन्झटजस्तै भएको छ, हाम्रो समाजमा । अब समाज परिवर्तनको डरलाग्दो समय आइसकेको छ । समस्या नआउँदै हामी अगाडिको झन्झटलाई पनि मीठो र पछाडिकोलाई पनि मीठोमै परिवर्तन गरौँ । व्यवहार परिवर्तन गरौँ । नयाँ पुस्तालाई ज्ञान, विवेक र संस्कार सिकाऊँ ।
एउटा मुक्तक राखेर अब बिदा हुन चाहन्छु :
प्रीतिभोज खान आएका
पाहुनाझैँ हुन् सन्तान
मीठोमा प्रशंसा र
फाटो बढाएर चित्त
कित्ताकाट नगर दम्पती हो
असल छोराछोरी हुन्
ईश्वरका वरदान !